Ndiri kuda shamwari mbiri saMyron Bolitar naWin Lockwood, vanobva kuHarlan Coben | Zvazvino Zvinyorwa
Ndiri kuda shamwari mbiri saMyron Bolitar naWin Lockwood vanobva kuHarlan Coben
Zvapera. 11 enganonyorwa yakadyiwa mukati isingasviki mwedzi mitanhatu pamwe nekukurumidza kuverenga zvekare kwekupedzisira, yaive yekutanga. Uye iwo wakajairwa mubvunzo kana iwe wapedza chimwe chinhu chakakukochekera zvakanyanya: ndoitei izvozvi? Mhinduro: wobva wanyora yakakosha chinyorwa che imwe yeanonyanya kufadza matema akateedzana izvo zvandakaverenga, izvo zve Myron bolitar uye shamwari yake inokwezva Kukunda Lockwood.
Ivo baba vezvisikwa, munyori weAmerica Harlan cobenAnofanira kunge akave nenguva inoshamisa yekuzviisa mushangu yeaya shamwari mbiri dzakasiyana, mativi maviri emari imwechete iyo hunhu hwevanhu. Kune vanoda kuverenga zvishoma yakatakura nekukurumidza hurukuro uye tsananguro dzakarurama, uye iyo utsotsi inoverengeka isina kunyepedzera kunze kweiyo yekuvaraidza nemiyero ye kusetsa, chiito uye mavara sepakutanga sekugadzirwa nehuremu hwakakomba. Heino inoenda ongororo yangu.
2 Myron Bolitar akateedzana
3.2 Kukunda Lockwood
3.3 Ndinovimba Diaz
3.4 Big cindy
3.5 Ellen naAlan Bolitar
3.6 Vamwe vatambi
3.6.1 Jessica mupinyi
3.6.2 Emily achidzika
4 A asi
7 Nei uchiverenga
Akazvarirwa mukati New Jersey Ndira 4 1962. Guta rino uye New York zvinogara zvichirongedzwa muMyron Bolitar akateedzana. Akapedza kudzidza mune zvematongerwo enyika uye akaburitsa bhuku rake rekutanga muna 1990. Makore mashanu gare gare, akatanga nhepfenyuro iyi. Kubudirira: sarudzo yemamwe mazita yevatambi vanotoisa hunhu pavari.
Akanyora mamwe enganonyorwa ane akasiyana protagonists, asi ihwohwo hunyengeri uye mamiriro echadenga. Ndiye munyori wekutanga kuhwina iyo Edgar, Shamus uye Anthony Awards zvinyorwa zvematsotsi nemabhuku ake zvakaburitswa munyika dzinopfuura makumi matatu. Chisikwa chake chazvino ndeche terevhizheni mune akateedzana Safe.
Myron Bolitar akateedzana
Ini ndichataura kuti kunyangwe iine akateedzana zvinowanzoitika inodiwa kutevedzera hurongwa, mune ino kesi unogona kutanga chero kwaunoda. The kuzvipedzisa nyaya uye mareferensi anodzokororwa mavambo uye hunhu hwevatambi mune ese mazita zvinoita kuti zvive nyore kusapotsa chero chinhu. Pasina kuenda kumberi, ini ndakatanga neyekupedzisira ndichikurumidza kutora bhuku rekutanga neruoko kuti ndiende kuzororo.
Iko kunakirwa mumuromo mangu kwaive kwakanaka izvo zvandakatoteedzera kubva pakutanga. Pakati pezvimwe zvinhu nekuti, pamwe ingangove isina zano reakateedzana kana ma protagonists ayo, kuti iwe unotanga kuverenga mumunhu wekutanga waWin haungokwezvi iwe chete, asi iwe unobva waona kuti uchaifarira.
Nekudaro, kubata nhandare dzese dzemitambo, nekukurumidza patinenge tine nyaya yakaiswa munyika yetenisi senge mune Basketball, gorofu kana baseball. Basketball inodzokororwa mune mamwe mazita, nekuti Myron Bolitar aimbove mutambi wehunyanzvi. Shanduko yake kuva gweta uye mumiriri wemitambo zvinomutungamira kuti agadzirise marudzi ese ezvinetso zvinomuka kune vatengi vake kana shamwari
Ndiyo shamwari yatiri kuda kuva nayo tese, akanakisa mwanakomana kana mukuwasha amai vaigona kurota, uye pasina kupokana, mukomana akakodzera. Kuda, kushaya njere uye kusetsa, zvakare anoremekedza, zviri pamutemo, ane hanya nevatengi vake, mhuri uye shamwari. Kudanana uye nostalgic, hukama hwako hwepamoyo hunogara huchifanira chikamu cherudo kana rudo. Isu tinomuziva mumakore ake ekutanga 30 uye tichiri kugara nevabereki vake, Ellen naAllan, muLivinstong, NJ, kwaunogara uchida kuve kana kudzoka.
Iine superhero yakaoma (Batman - Terevhizheni yaAdam West, ndapota- chirevo mune angangoitika ese), anopinda mudambudziko achida uye asingadi, nguva dzose kutsvaga chokwadi uye kururamisira. Zvanga zviri aimbove nyanzvi basketball uyo akabviswa mudare nekukuvara kwakakomba. Uye iye anoda Broadway mimhanzi.
Kudzidza Mutemo MuUniverististy ye Duke, kwaakasangana Kukunda Lockwood, waunogara naye uye inozova shamwari isingaparadzanisike. Zvinodaro mumiriri wemitambo kutanga uyezve vatambi nevamwe vanozivikanwa, asi iro gamba rakakura e mudzidzi anotsvaga Zvinomupinza mumatambudziko ese.
Zita chairo: Windsor Horn Lockwood III. Kubva kumhuri yemabhirionia, anozvikudza, ane runako uye jongwe, asi akasimba-anotaridzika uye anonyengera. Edge, inosemesa, ine mukurumbira we misanthrope, misogynist uye psychopathanovanza hunhu hwakadai kwasviba uye kuchitonhora Chemhondoro zvine musoro uye zvachose akavimbika uye ane rupo kune shamwari shoma dzaanofunga saizvozvi.
Haazeze kwechipiri kuti avaburitse mukukurumidza munzira dzinonyanya kukurumidza izvo zvinodikanwa. Pasina kuvhiringidzika uye pasina kuvhunduka, zvisinei nemari uye pasina kusiya trace. Akapenya uye akabudirira mutevedzeri wemari masikati uye vigilante kunze kwemutemo husiku, ane hunyanzvi hwakakura semurwi uye zvese zviripo pamari (mari, chekufambisa chega, vanobata, zvombo…).
Kungotaura zita rake kunoita kuti utye zvakanaka, zvakaipa uye zvakajairwa. Mune mamwe mazwi, ndiye zvakare shamwari yatiri kuda isu tese kuva nayo. Uye iyo kuba yebasa racho.
Myron akagara pasi.
"Uri mukomana anotyisa."
"Zvakanaka, handidi zvekushamisira," Win akadaro.
Ndiye mumwe wevashoma vanyori vanyori avo Ndakakwanisa kuona " zviri nyore mushure mekuziva rondedzero yayo. Icho chaive chiratidziro chiriporipocho cheiye akanaka kwazvo mutambi wechiChirungu, uye zvakare nechiso chinotyisa, ndiani Anthony Andrews, mune yake diki vhezheni uye anozivikanwa saishe iye Sebastian flyte de Dzokera kuBrideshead, iwo akateedzana akateedzana ema80s ane zita rakafanana nebasa rekutanga re Evelyn anochema.
Asi kune vechidiki terevhizheni zvizvarwa Ini ndawanawo chimiro chine yakafanana uye ine moyo munyoro, asi neicho chinopenga kubata kwaWin: icho cheaustralia mutambi Simon baker, the patrick jane de Nyanzvi yepfungwa. Saka wangu chaiye Win anga ari muchinjikwa pakati pavo.
La shamwari yepamwoyo kubva kuMyron. Iko kutanga kwako secretary uye anenge musikana wezvese zvobva zvazova zvake socia. Zvekare uye chaizvo mukurumbira wwe mutsimba, or the kudzvanya kubata mune yake yechikadzi vhezheni, iye aizivikanwa se Pocahontas diki. ari ChiLatin mavambo, akanaka, akavimbika, akangwara, akashinga uye anokwanisa kuzvipira nekuda kweshamwari dzake kunzvenga matambudziko kwavari, sezvazviri Ruzivo rwekupedzisira. Iye anopedzisira awana iyo yekare kubwinya kwekushanya kwetembere wedunhu kuenda zvakare.
Kana a hombe hombe yemukadzi seyakakura seyakanaka chose, naive uye unapologetic. Iye akabatana pamwe naEsperanza uye ivo vakabudirira zvinoshamisa. Izvo zvakare ichave iyo secretary kuMyron's agency uye nerubatsiro rwakakura pazviitiko zvakawanda futi. Ndihwo hunhu, pamwe naWin, umo wakanyanya ironyoni anodaro Coben kana achitsanangura kana kuibata.
Ellen naAlan Bolitar
ari vabereki MaMyron ndevaroorani vakasarudzika sezvo vakanamatira zvakanyanya kumwanakomana wavo. Ivo vanotora mazhinji e kushungurudza mupfungwa kubva kuna Myron, anovafarira uye anobvuma kuti haanyare nekugara navo kusvika makore makumi matatu. Pakupedzisira anozotenga yavo imba kuti arambe aripo paanodzokera kuLivinsgton.
Coben zvakare anowanzoitika kana achipa kana kutaura nezvavo mumanyowani ese, achiudza zvakafanana maanecdotes (El Al, sendege dzeIsrael, zvichinongedzera kumavambo avo echiJuda ayo ariwo munyori).
Ellen Bolitar aive gweta rine mukurumbira, akatsigira mukurwira kwekutanga pamusoro pekodzero dzevakadzi. Alan aive maneja weimwe fekitori yemachira Uye nguva dzose Myron inoreva iyo Olor wematama ake paanomutsvoda kuti amukwazise, ​​kana kune tsika ye kugara wakamuka husiku kusvikira aziva kuti mwanakomana wake ari kuuya kumba. Vari yakakosha muhupenyu hwaMyron uye kana nguva nezvirwere zvazvibata, achanzwa kubatwa zvakanyanya.
El rudo rusingaperi, asi neakawanda kumusoro uye pasi, kubva kuMyron. Munyori yekubudirira, kuuya kwake uye zvinoitika muhupenyu hwaMyron zvinomukanda pachiyero zvishoma. Mushure mekuzorora kwekutanga kwaakamusiya, anodzoka mumusoro wekutanga uye vanotangazve hukama. Vachaenderera mberi naye kudzamara vapedza chaizvo.
El Rudo rwaMyron rwekutanga kukoreji. Iye ndiye protagonist we Kutya kwakadzama, kwaanobvunza Myron kuti abatsirwe kutsvaga iye asipo wemongo wemupiro wemwanakomana wake anorwara.
Imwe yeanonyanya kutaurwa mavara. Aimbova Mossad Mumiriri, inogara ichioneka transvestite nendebvu dzakakora, achitaura mumunhu wechitatu uye akagadzirira chero chinhu. Tinozviziva se muvengi waMyron, waanenge oda kumuuraya kamwe, uyezve se mubatsiri.
Rudo rukuru uye rwekupedzisira kubva kuMyron. Munhu waunozivana naye mutori wenhau, mutepfenyuri wepa terevhizheni, uyo Myron anosangana naye netsaona mushure mekurambana kwake naJessica uye mushure mechiitiko chinomusiya akatanhamara. Kutizira kwake kuchitsuwa pamwe chete naye, uyo zvakare ane kukuvara kukuru kwake, ndiko kuchave kutanga kwerudo rwunokanganiswa kwemakore akati wandei asi ruchazoonekwazve Kunyangarika. Iri zita roga ndiro rinowanikwa naCoben munhu wekutanga kubva kuMyron. Iyo zvakare ndiyo yepasi rose, yakagadzwa muParis neLondon, pakati pedzimwe nzvimbo.
El muzukuru kubva kuMyron. Mwanakomana wehama yake Brad naKitty Bolitar, mukadzi anonetsa anopa Myron yakawanda yemusoro. Ivo ndivo protagonists e Moto muzhinji, uko pamusoro pekubatsira aimbove mutambi wetenisi kutsvaga murume wake akashaya, Myron achanzwazve kubva kuna mukoma wake, uyo akasiya kare asina kana trace.
Mickey anozopedzisira agara nasekuru nasekuru vake mushure mekukunda matambudziko nasekuru vake. Izvo zvakare mutambi mukuru webhasikiti uye ichabatsira Myron mune iro zita rekupedzisira, Runyararo rurefu. Izvo zvakare protagonist yevechidiki nhevedzano yemazita matatu. Chekutanga chete chasvika pano, Refuge.
Pamwe kukundikana kwe match zvinyorwa izvo zvinoitika mune yekupedzisira zita, uko hunhu uyo ​​marongero ake anoita kunge akajeka munyaya yapfuura, anoonekazve. Zvichida kuve uri pakati peMickey Bolitar akateedzana, chimiro ichi chakagadzirwazve. Asi zviri kuvhiringidza kune vaverengi veMyron.
Kujekesa chimwe chinhu pakati pekunakidza, kurondedzera kugona uye kuita kwese, ini ndichati iyo munhu wekutanga de Myron en Kunyangarika. Asi ndinofanira kuratidza izvozvo Ndine hutera hweichi chishandiso Uye saka ini ndinogara ndichifarira mavara kuti "taura neni" zvakananga. Paunenge uri Runyararo rurefu es kunda uyo anotaura mukupindira kwake, Coben anopedza basa regumi.
Rufu pagumi nemasere
Nhanho imwe isiriyo
Moto muzhinji. Yaive iyo RBA Mubairo wenyaya yematsotsi.
Zvinoita sezvishoma kwauri here? Zvakanaka, huya, mazwi matatu: kunakidzwa, myron uye kuhwina.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » Ndiri kuda shamwari mbiri saMyron Bolitar naWin Lockwood vanobva kuHarlan Coben
Rossana Vigiano akadaro
Ini ndaida akateedzana uye ndinovimba kuti Harlan Coben achatipa nhamba yegumi nembiri yezvakateedzana kuitira kuti pasave nekupokana. Wataura chokwadi, Myron naWin vanorapa.
Pindura Rossana Viggiano
Ndinovimba pane zvitsva zvitsva zveMyron naWin, hongu. Ndavasuwa. Ndatenda nekutaura kwako.
Almudena Rueda akadaro
Iyi nhepfenyuro iri kundiperekedza panguva yekuvharirwa uye iri kundivaraidza zvakanyanya. Ndiri kuzviverengera kunze kwehurongwa, asi ini handina basa nezve chero chinhu.
Ivo vanobata kubva panguva yekutanga, inokurudzirwa kwazvo
Pindura Almudena Rueda
Ini ndaigara ndichifungidzira Win mumufananidzo wemutambi airidza hama yaFrasier